Akụkọ - The Belt and Road
Atụmatụ Belt na Road buterela ọgbọ ọhụrụ nke ijikọ ụwa ọnụ n'ụzọ akụ na ụba. Nkwupụta nke ọgbakọ ọgbakọ nke iri na iteghete nke ndị Kọmunist nke China rụtụrụ aka na ọ dị mkpa ilekwasị anya na owuwu Belt na Road, na -ekwusi ike ibubata na ịpụ, na ịgbaso ụkpụrụ nke ịjikọ ọnụ, imekọ ihe ọnụ na nkwonkwo. mmepe.
Atumatu "Otu Belt, One Road" butere n'ọgbọ ọhụrụ nke ijikọ ụwa ọnụ.
Nkwupụta nke ọgbakọ ọgbakọ nke iri na iteghete nke ndị Kọmunist nke China rụtụrụ aka na ọ dị mkpa ilekwasị anya na owuwu “Belt and Road”, na -agbaso ụkpụrụ iwebata na ịpụ, soro ụkpụrụ nke nnukwu ndụmọdụ, nkwonkwo. iwu na ịkekọrịta, na-ewusi ike imepụta ihe ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ mepere emepe, na ime njikọ nke ime na mpụga nke oke osimiri, yana enyemaka ụzọ abụọ n'etiti ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Ụkpụrụ mepere emepe.
Dị ka otu n'ime ndị ọsụ ụzọ nke ụlọ ọrụ China 'na -apụ', Yueqing Junwei Electric Co., Ltd. (nke a na -akpọ Junwei Electric) na -agbaso ihe ọhụrụ, ahaziri, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mepere emepe ma kesaa n'okpuru ndabere nke ime ngwangwa obodo. nke atụmatụ "Belt and Road". Echiche mmepe, were ohere Xinjiang rụpụtara isi mpaghara Silk Road Economic Belt, wee na -emepe oghere ọhụrụ maka mmepe.
Site na America, Central Eshia ruo Afrịka, site na mbupụ ngwaahịa kwụụrụ onwe ya ruo nkwekọrịta zuru oke nke ọrụ, site na 'ịkwadebe China' ruo 'ịkwadebe ụwa', Junwei Electric na-aga n'ihu na "Belt na Road", na-egosi ụwa. mmasi nke okike China.
Na -emeghachi omume na atụmatụ "One Belt One Road"
Ogologo oge tupu ewepụta atụmatụ "One Belt One Road", Junwei Electric amalitela inyocha ahịa mba ofesi.
Ihe karịrị afọ iri gara aga, Junwei tụgharịrị gaa n'ahịa mba ụwa. Site na mgbali na-adịghị akwụsị akwụsị, ebupụla ngwaahịa Junwei Electric naanị ya na mba dị iche iche n'Africa, na-emepe usoro ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ '' gazuo ụwa '' na ịhụ ezigbo mmalite maka ngwaahịa na ọrụ dị elu iji baara ụwa uru.